Ziziphi izixhobo ezisisiseko kubacebisi abomileyo
Akungabazeki ukuba ukuveliswa kwezixhobo zokuhlamba iimpahla, ukuphucula ngakumbi ukusebenza kweenkonzo zokuhlamba iimpahla, ngexesha elifanayo kunempembelelo ethile ekubuyiselweni kotyalo-mali. sisisiseko esisisiseko secoceko esomileyo.
Kodwa ziziphi izixhobo ezisisiseko ezicocekileyo ezicoca?
Sinoqhelekileyo esivamile isherom esomileyo, isomisi, i-disinfection khabinethi, umatshini wokuhlambalaza, umshini wokutywala, umqhubi we-steam, njl njl. xeshanye.
Izixhobo zokucoca ngokukhawuleza, ngokuqinisekileyo, ukhethe kwaye uthenge, uhlawule ingqalelo kwi-brand.
Ziziphi izixhobo zokucoca ezinomileyo
Ngenxa yokuba amaxesha amaninzi, iteknoloji yokucoca iteknoloji kunye nokuqulunqwa komsebenzi, UKWENZA ukucoca i-dryer ephezulu kubathengisi abaphezulu baya kuhamba phambili. Umenzi wesiprofeto sesebenzi emva kokuthengiswa kweenkonzo kusele ndawo, le ndawo ingabalondoloza ngakumbi iimfuno zokulahleka kwethu.
Ngenxa yokulondolozwa kwezixhobo, u-ENEJEAN umcebisi wecandelo lokucoceka oomatshini olumileyo uphakanyiswa kwakhona ngezinye iziphakamiso.
Okokuqala, ukugcinwa rhoqo kunye nokugcinwa kweso sandla .Kwelinye icala isisiseko esisodwa esizifihliweyo, enye inokunyusa ubomi beenkonzo zezixhobo.
Okwesibini, amandla ngethuba elifanelekileyo. Ngokukodwa kwimeko ngaphandle kokusetyenziswa kwezixhobo, ngethemba lokuba sinokwenza umsebenzi omhle kwimilinganiselo yokhuseleko, ukuphuma kwamandla ngexesha elifanelekileyo.
Kakade, ekusebenziseni izixhobo, sinemibuzo ethile, sinokuqhagamshelana ne-ENEJEAN imiba yokucoca i-brand clean.
Inqaku lokugqibela: Kufuneka uvule uluphi uhlobo l...
Inqaku elilandelayo: Iyintoni intengo efanelekileyo...